Voadika ny 20 Septambra 2017 3:45 GMT
(Marihina fa tamin'ny 24 Aprily 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Miarahaba anareo rehetra tratry ny Shuvo Bangla Nobobarsho (Taombaovao Bengali) . Andeha hojerentsika izay nolazain'ny bilaogy Bangladeshi vao haingana.
* Fankalazana: nanoratra momba ny “Pahela Baishakh”, ilay Taombaovao Bengali izay nankalazaina tamim-pientanentanana niaraka tamin'ny vahoaka marobe tamin'ny 14 aprily 2006 tao Bangladesh ny 3rd world view .
* Kolontsaina: namoaka ny eritreriny momba ny didim-pitsarana navoakan'ny fitsarana Britanika mikasika ilay vehivavy Bangladeshi iray izay voaheloka noho ny fanozongozongozonana tamin-kerisetra ny zanany mba hanasitranana azy tamin'ny ‘fanahy ratsy’ i Shapps .
* Cricket: adalan'ny lalao cricket ireo Bangladeshis. Velom-panantenana avokoa izy ireo raha nitarika nanoloana ilay tompondaka erantany Aostraliana tamin'ny lalao fitsapana vao haingana i Bangladesh saingy resy tamin'ny lalao ihany nony farany izy ireo. Nanoratra ny fomba hihazakazahan'ny Bangladeshis sasany any amin'ny finoanoam-poana i Mezba mba hahazoan'izy ireo vintana tsara kokoa .
* Toekarena: resahan'i Shafiur ny politika ara-toekarenan'ny fampiasam-bola ao Bangladesh izay manasongadina ny raharaha Niko.
* Rakipeo: namoaka ny famakiana ireo fandikanteny Anglisy momba ny tantara fohy miisa roa mikasika an'i Rabindranath Tagore ho rakipeo i Joe ao amin'ny Bongo Vongo: – ‘Ireo Vato Noana‘ sy ‘Ny Fandresena‘ .
* Sary hosodoko: namoaka rohy mankany amin'ny antsafa nifanaovana tamin'i Hashem Khan, ilay Mpanakanto Mpampianatra ao Bangladesh, izay anisan'ny nankafiziny tamin'izy mbola zatovo i Kazi Rubaiat Imam.
* Mari-panondroana: nanome ny heviny momba ny fifandonan'ny fivavahana sy ny mari-panondroana i Nashat .
* Fanabeazana: namoaka lahatsoratra fanadihadiana momba ny hala-tahaka ao amin'ny Oniversiten'i Bangladesh i Deshcalling .
* Fifidianana: manao topi-maso manety momba ny rafi-pifidianana ao Bangladesh izay voakorontan'ny fampiasana ny vola ambadika sy ny fampiasan-tsandry i Ahmede Husein.
Mandrisika ny tanora ao Bangladesh mba hanery ny fanovana amin'ny fisafidianana ny mpitarika mendrika rehefa amin'ny fifidianana hoavy i Electric blues.
Namoaka fanontaniana sy valiny vitsivitsy momba ny antony nahatonga ny herisetra talohan'ny fifidianana vao haingana tao Dhaka izay nitarika korontana tao Bangladesh i Shafiur .
* Politika: Nirongatra tamin'ny fanehoan-kevitra ny tontolon'ny bilaogy Bangladeshi taorian'ny fanambaran'ilay bilaogera sady mpanao gazety Tasneem Khalil fa nandany vola be tamin'ireo Parlemantera Amerikana lobista miisa 3 ny governemanta ao Bangladesh mba hanatsarana ny endrik'izy ireo ary ny tatitra vao haingana momba an'i Bangladesh tao amin'ny gazetiboky TIME no vokatr'izany ezaka izany.
* Zon'olombelona: nitsikera ny tetika iadiana amin'ny fampihorohoroana i Mash. Raha nitanisa ny herisetra nataon'ny mpitandro filaminana vao haingana tamin'ny mpanao gazety nandritra ny lalao cricket nifanandrinan'i Aostralia sy Bangladesh, nanamarika izy fa raha mbola manohy mampihorohoro ny olom-pireneny ny governemanta [tsy miankina amin'ny atsy sy aroa] ao amin'ny tontolo fahatelo dia tsy hitsahatra ny tontolo miteraka herisetra.
* Ny fiteny: namoaka fanambarana mahatalanjona i Adda – ‘ Mety ho faty ny antsasaky ny fiteny miisa 6000 eto amin'izao tontolo izao rehefa aoriana kely’ , raha niresaka momba ny Andro Iraisampirenena ho an'ny Tenindrazana izy.
* Fialamboly: nampatsiahy ilay sarimihetsika ‘Khela Ghor (tranon-tsaribakoly) i Razib Rashedin ary mihevitra izany ho anisan'ny sarimihetsika Bangla tsara indrindra hitany tao anatin'ny andro vitsivitsy.
* Fiainana sy Ara-panahy: Na io lohahevitra mikasika ny ara-pinoana, ny ara-panahy, ny fisaintsainana lalina, ny yoga, ny fampianarana misitery na ny vavaka dia hadihadian'i Sadiq ao amin'ny bilaoginy mitondra ny lohateny hoe ‘Aingam-panahy sy Eritreritra Famoronana’ avokoa izany rehetra izany.